Ch 5 John – 2azụ
Home / Bible / Oziọma Jọn / Ch 5 John
5:1 Mgbe ihe ndị a, enwere a ụbọchị oriri ndị Juu, na otú Jizọs rịgooro Jerusalem.
5:2 Ugbu a na Jerusalem bụ Ọdọ Mmiri Evidence, nke Hibru a maara dị ka Ebe Ebere; ya nwere ise porticos.
5:3 Yana a dina a oké ìgwè ndị ọrịa, ndị ìsì, ndị ngwọrọ, na kpọnwụrụ, na-eche maka ije nke mmiri.
5:4 Ugbu a mgbe ụfọdụ ihe mmụọ ozi Jehova ga-esi n'agbụrụ banye n'ime ọdọ mmiri, na otú ahụ ka mmiri kpaliri. Ma onye ọ bụla n'agbụrụ mbụ banye n'ime ọdọ mmiri, mgbe ngagharị nke mmiri, na a gwọrọ ya nke ihe ọ bụla nsogbu ahụ ike ẹkenịmde ya.
5:5 Na e nwere otu nwoke nọ na ebe, ọ nọ na-adịghịzi ike iri atọ na asatọ afọ.
5:6 Mgbe ahụ, Mgbe Jizọs hụrụ ya nọ na-eri, na mgbe ọ chọpụtara na ọ gwọrọ ruo ogologo oge, o wee sị ya, "Ị chọrọ ka a gwọọ?"
5:7 The ghara ịdị irè zara ya: "Onyenwe anyị, M na-adịghị onye ọ bụla na-etinye m na ọdọ mmiri, mgbe mmiri e kpaliri. N'ihi na dị ka m na-aga, ọzọ arịdata n'ihu m. "
5:8 Jizọs wee sị ya, "Bilie, buru ihe ndina gị, na-eje ije. "
5:9 Ozugbo ahụ, a gwọrọ nwoke ahụ. O we were ya ndina na-eje ije. Ugbu a, a ka nọ n'ụbọchị izu ike.
5:10 Ya mere, ndị Juu sịrị na otu onye n'ime ndị a gwọrọ: "Ọ bụ izu ike. Ọ bụ iwu na-akwadoghị ka ị na-ndina gị. "
5:11 Ọ zara ha, "Onye gwọọ m, O wee sị m, 'Were ihe ndina gị gawa ije.' "
5:12 Ya mere, ha jụrụ ya ajụjụ, "Ònye bụ nwoke, onye sịrị gị, 'Were ihe ndina gị na-eje ije?'"
5:13 Ma onye e nyere ike amaghị onye ọ bụ. N'ihi na Jizọs esiwo n'ebe ahụ pụọ n'ebe ìgwè mmadụ ahụ gbakọtara na ebe.
5:14 N'ikpeazụ, Jizọs hụrụ ya n'ụlọ nsọ, o wee sị ya: "Lee, ị gwọọ. Ekwela họrọ mehie n'ihu, ma ihe njọ nwere ike ime gị. "
5:15 Nwoke a je, o kọọrọ ndị Juu na ọ bụ Jizọs bụ onye nyere ya ike.
5:16 N'ihi nke a, ndị Juu na-akpagbu Jesus, n'ihi na ọ na-eme ihe ndị a n'ụbọchị izu ike.
5:17 Ma Jizọs zara ha, "Ọbụna ugbu a, Nna m na-arụ ọrụ, na m na-arụ ọrụ. "
5:18 Ya mere, n'ihi nke a, ndị Juu na-achọ igbu ya otú ahụ ọbụna karị. N'ihi na ọ bụghị nanị na ọ bụ kwụsị izu ike, ma ọbụna o kwuru na Chineke bụ Nna ya, na-eme ka ya onwe ya na Chineke hà.
5:19 Mgbe ahụ, Jizọs zara, si ha: "Amen, amen, M asị unu, Ọkpara ahụ bụ enweghị ike ime ihe ọ bụla nke ya onwe ya, ma naanị ihe ọ hụrụ Nna-eme. N'ihi na ihe ọ bụla ọ na-eme, ọbụna nke a ka Ọkpara-eme, N'otu aka ahụ.
5:20 N'ihi na Nna hụrụ Ọkpara ya n'anya, na ọ na-egosi ya ihe niile ya onwe ya na. Na Olu kariri ndia uku ka ọ ga-egosi ya, nke mere na ị ga-eche.
5:21 N'ihi na dị nnọọ ka Nna na-akpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ ma na-enye ndụ, otú a kwa ka Ọkpara-enye ndụ nye onye ọ bụla ọ chọrọ.
5:22 N'ihi na Nna adịghị ekpe ikpe na onye ọ bụla. Ma o nyere niile ikpe Nwa,
5:23 mere na ndị niile wee na-asọpụrụ Ọkpara, dị nnọọ ka ha na-asọpụrụ Nna. Onye ọ bụla nke na-asọpụrụ Ọkpara, adịghị asọpụrụ Nna ya nke zitere ya.
5:24 Amen, amen, M asị unu, na onye ọ bụla anụ okwu m, na-ekwere na ya bụ onye zitere m, nwere ndụ ebighị ebi, na na ọ dịghị-aga n'ime ikpe, ma kama ọ obe si n'ọnwu ba na ndu.
5:25 Amen, amen, M asị unu, na oge awa na-abịa, na ọ bụ ugbu a, mgbe ndị nwụrụ anwụ ga-anụ olu Ọkpara Chineke; na ndị na-anụ ya ga-adị ndụ.
5:26 N'ihi na dị nnọọ ka Nna m nwere ndụ n'ime onwe ya, otú a kwa ka o nyere Ọkpara ya nwee ndụ n'ime onwe ya.
5:27 Na o nyere ya ikike imezu ikpe. N'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ.
5:28 Atụla anya na nke a. N'ihi na oge awa na-abịa mgbe ndị nile dị n'ili ga-anụ olu Ọkpara Chineke.
5:29 Na ndị na-mere ezi gēsi puta na mbilite n'ọnwụ nke ndụ. Ma n'ezie, ndị emewo ihe ọjọ ga-aga na mbilite n'ọnwụ nke ikpe.
5:30 Agaghị m enwe ike ime ihe ọ bụla nke onwe m. Dị ka m na-anụ, otú m na-ekpe ikpe. Na m ikpe dị. N'ihi na m na-adịghị achọ uche m, kama uche onye zitere m.
5:31 Ọ bụrụ na m na-enye ihe àmà banyere onwe m, m na-agba akaebe na-abụghị eziokwu.
5:32 E nwere ihe ọzọ na-enye ihe àmà banyere m, amakwaara m na àmà nke ọ na-enye banyere m bụ eziokwu.
5:33 Unu zitere John, na ọ na-achụ na-agba akaebe bụ eziokwu.
5:34 Ma, anaghị m anabata àmà nke si n'aka mmadụ. Kama, M na-ekwu ihe ndị a, ka unu wee zọpụta.
5:35 Ọ bụ a na-ere ma na-acha ìhè. Ya mere ị dị njikere, oge ahụ, na-aṅụrị ọṅụ n'ìhè ya.
5:36 Ma m jide a ukwuu na-agba akaebe ka nke Jọn. N'ihi na ọlu nke Nnam nyeworom, ka m wee mezue ha, ndị a na-arụ ọrụ ha na m na-eme, na-enye ihe àmà banyere m: na Nna m ziteworo m.
5:37 Nna nke zitere m ka m nwere onwe ya nyere àmà banyere m. Na ị dịghị mgbe nụrụ olu ya, ma ọ bụ na ị hụrụ ya anya.
5:38 Na ị na-adịghị ya na okwu ọ nọgide nime unu. N'ihi na onye ahụ o zitere, otu ị ga-ekweghị.
5:39 Amụ Akwụkwọ Nsọ. N'ihi na ị na-eche na ha na ị nwee ndụ ebighi ebi. Ma ha na-enye ihe àmà banyere m.
5:40 Na ị na-adịghị njikere bịakwute m, ka unu wee nwee ndụ.
5:41 Adịghị m anabata otuto si n'aka mmadụ.
5:42 Ma, m maara na ị na, na ị na-enweghị ịhụnanya Chineke n'ime unu.
5:43 Abịawo m n'aha Nna m, na unu adịghị anabata m. Ọ bụrụ na ọzọ ga na-abata na ya aha ya nke, ya ị ga-anabata.
5:44 Olee otú ị na-kwere, ị na-anabata otuto n'aka ibe ma unu na-achọ otuto nke si n'aka Chineke naanị?
5:45 Agaghị na-atụle ka m wee ebubo ị na Nna. Ọ bụ onye na ebubo ị, Moses, onye ị na-atụ.
5:46 N'ihi na ọ bụrụ na ị na-ikwere na Moses, ikekwe ị ga-ekwere na m nwekwara. N'ihi na o dere banyere m.
5:47 Ma ọ bụrụ na unu ekweghị site odide ya, olee otú ị ga kwere m okwu?"